Manarintsoa afovoany Porofon�ny fahantran�ny Malagasy
Fahafatesana diplaomaty Amerikanina Hanadihady ny FBI
Lehilahy diplaomaty amerikanina miasa ao amin’ny ambasady Amerikanina eo Ambohibao Antananarivo no hita faty tao amin’ny trano fonenany eny Ambohibao ihany ny sabotsy 22 septambra 2018 tokony ho tamin’ny 1 ora maraina.
Fiovaovan’ny toetr’andro Mila miomana hanatsarana ny vokatra
Tombanana eo amin’ny 2 hatramin’ny 3 taonina isaky ny hektara eo ny voka-bary eto Madagasikara ary rehefa tsara ny vokatra dia mety mahatratra hatrany amin’ny 5 taonina isaky ny hektara mihitsy.
Andry Herizo Rakotozafy Nodimandry omaly
Nodimandry omaly alarobia 19 septambra i Andry Herizo Rakotozafy, mpiara-miasa akaiky amin’ny praiminisitra Ntsay Christian, avy eo voatendry ho talen’ny kabinetra ny fiandohan’ny volana jona.
Voasambotra tamin’ny raharaha praiminisitra Vonon-kiaro azy ny Me Olala
Rehefa nahare ny vaovao nilaza aho, hoy ny mpisolovava Willy Razafinjatovo na Olala,
Ankoatra an�i La R�union kely etsy Ampefiloha izay ahitana fianakaviana manodidina ny 400 isa mipetraka amin�ny trano sachet dia anisan�ny ahitana taratra ny fahantrana lalina mianjady amin�ny Malagasy ihany koa ny etsy Manarintsoa afovoany, andrefan�i La R�union kely.
Fianakaviana an-jatony koa izy ireo no mivelona amin’ny asa fivarotana ireo korontan’entana sy kojakoja efa tsy ilaina intsony any an-tokantrano, hamidy manomboka amin’ny 50 Ar ka hatramin’ny 5.000 Ar ny farany ambony indrindra. Raha araka ny fanazavan-dRaharisoa Vololomboahangy anisan’ireo renim-pianakaviana mpivarotra eny an-toerana dia eny amin’ny bakan-jaoridira izy ireo no maka ny entana amidiny. Efa samy manana ny toerana fakany entana avokoa ny mpivarotra tsirairay. azy dia eny Antsahavola no fakany entana, asa tsy maintsy hatao isan-kariva manomboka amin’ny 6 ora sy sasany ka hatramin’ny 8 ora sy sasany alina. Tsy manasa intsony izy ireo aorian’izay fa avy hatrany dia mivarotra. Mahazo 6.000 Ar isan’andro ny mpivarotra iray rehefa tena mandeha ny tsena, 2.000 Ar rehefa tena maina. Ankoatra ny tavoahangy plastika, ireo karazana boaty kely azo averina atao boatin-tsavoka, ny kiraro tonta, ny pôketra, ny akanjo, ireo fitaovam-pianarana efa tsy ilaina intsony toy ny tapaka crayon de couleur, karazana piesy fanamboarana radio na fiara, ny rice coocker efa maty, ny finday….hita eny ihany koa ireo tapaka tafon-trano, vy fanamboaran-trano, …efa tsy ilaina intsony. Araka ny fanadihadiana natao hatrany dia olona mitovy amin’ireo mpivarotra ihany ny ankamaroan’ireo mpanjifa tonga eny an-toerana, izany hoe tena sahirana amin’ny fiainana. Asa raha mba mahalala ny fisian’io toerana io ihany ny fitondram-panjakana na tsia ? Tsara mirotsaka eny mihitsy ny filoha Rajaonarimampianina raha mitady porofo mivaingana fa hoe tena mahantra fadiranovana marina ny Malagasy maro an’isa a !